बडादशैंको पहिलो दिन घटस्थापना आज, साइत कति बेला रहेछ ? - Aarthiknews
बडादशैंको पहिलो दिन घटस्थापना आज, साइत कति बेला रहेछ ?
काठमाडौं । २०७७ सालको बडादशैंको आज पहिलो दिन घटस्थापना गरिदैछ । आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म १५ दिन दुर्गापक्षमा धूमधामका साथ मनाइने बडादशैंको पहिलो दिन आज घरघरमा विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापनासहित घटस्थापना गरिन्छ ।
घटस्थापनाको साइत आज बिहान ११ः४६ बजे रहेको समितिले जनाएको छ । आज दिनभर चित्रा नक्षत्र परेकाले शास्त्रीय वचनानुसार मध्याह्नकालमा अभिजित् मुहूर्तको साइत घटस्थापनाका लागि दिइएको समितिले बताएको छ ।